कस्तो छ २५ हजारमा आउने सामसङ ग्यालेक्सी एफ–२२? (भिडिओ रिभ्यु) :: Setopati
कस्तो छ २५ हजारमा आउने सामसङ ग्यालेक्सी एफ–२२? (भिडिओ रिभ्यु)
नेपाली बजारमा हामीले २० देखि ३० हजार मूल्यमा ठिकठाक फिचर भएको फोन पाइरहेका हुन्छौं। सामसङले भने हालै मात्र २५ हजार रूपैयाँ पर्ने नयाँ 'ब्लकबस्टर' ग्यालेक्सी एफ–२२ ल्याएको छ।
ग्यालेक्सी एफ–२२ बाट सामसङले पहिलोपटक नेपालमा आफ्नो एफ सिरिज स्मार्टफोन बिक्री सुरू गरेको हो। यो फोनलाई कम्पनीले सस्तो र राम्रो फोनको सूचीमा राखेको छ।
सुरूमा फोनको डिस्प्लेबारे कुरा गरौं।
यसपटक सामसङले डिस्प्लेमा केही अपडेट ल्याएको छ। ग्यालेक्सी एफ–२२ मा ६.४ इन्चको एचडी प्लस सुपरएमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले छ र यसमा ९० हर्जको रिफ्रेस रेट छ। यसबाट हामीले स्मुथ स्क्रोलिङ अनुभव र बिना रोकावट स्क्रिन चलाउन सक्छौं।
यो फोनमा भएको ६०० निट्सको हाइ ब्राइटनेस मोड फिचरबाट चर्को घाममा पनि स्क्रिन सजिलै हेर्न मिल्छ।
साथै डल्बी एटोम फिचरले फोनमा उत्कृष्ट अडियो र सिनेम्याटिक भ्युइङ अनुभव दिने कम्पनीको दाबी छ।
ग्यालेक्सी एफ–२२ को तौल जम्मा २०३ ग्राम छ। त्यसैले यसलाई हातमा बोक्न वा पकेटमा राख्दा भारी पक्कै हुँदैन। स्मुथ फिनिस्ङि भएको यो फोन अगाडिको भाग सिसाले बनेको छ। पछाडिको भाग र फ्रेम भने प्लास्टिकको छ।
यसको दायाँपट्टि भोल्युम अप–डाउन बटन र बायाँपट्टि भने सिम स्लट छ। यसमा हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार मेमोरी कार्ड पनि हाल्न सक्छौं। यसको पछाडि चारवटा क्यामरा देख्न सक्छौं। जसमा मुख्य क्यामरा ४८ मेगापिक्सलको छ भने ८ मेगापिक्सलको अल्ट्रा–वाइड क्यामरा, २ मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामरा र २ मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामरा छ।
फोनमा भएको अल्ट्रा–वाइड लेन्सले १२३ डिग्रीसम्मको भ्यु खिच्न सक्छ। म्याक्रो लेन्सबाट हामीले क्लोज–अप सटहरू लिन सक्छौं र डेप्थ क्यामरा लाइभ फोकस फिचरका साथ आएको छ, जसबाट राम्रो पोट्रेट फोटो खिच्न सक्छौं।
यसको अगाडिपट्टिको माथितिर भने १३ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा छ। यो सेल्फी क्यामराबाट हामीले ब्राइट र क्लियर प्रो लेभल सेल्फीहरू खिचेका छौं।
क्यामराको अनुभव अझ गुणस्तरीय बनाउन सामसङले ग्यालेक्सी एफ–२२ मा हाइपर ल्याप्स, स्लो मोसन, फुड मोड, प्रो मोड र एआर जोन जस्ता फिचर समावेश गरेको छ।
यो फोन मिडियाटेक हेलियो जी–८० प्रोसेसरबाट बनेको हो। यसले अप्टिमाइज्ड पफर्मेन्स, स्मुथ मल्टिटास्किङ र थुप्रै एप चलाउँदा वा इन्टरनेटमा ब्राउज गर्दा पनि कम पावर खपत गर्छ।
ग्यालेक्सी एफ–२२ चार जिबी र्‍याममा ६४ जिबी इन्टरनल स्टोरेज र ६ जिबी र्‍याममा १२८ जिबी इन्टरनल स्टोरेजको विकल्प साथ आएको छ। हामीलाई आफ्नो फोनमा कति स्पेस चाहिन्छ, त्यही अनुसार यी दुई विकल्पमध्ये उपयुक्त र्‍याम र इन्टरनल स्टोरेज भएको फोन रोज्न सक्छौं।
यो फोनको ब्याट्री र पफर्मेन्स पनि उत्तिकै उत्कृष्ट छ। यसमा ६ हजार एमएएचको ब्याट्री पावर र २५ वाटको चार्जिङ क्षमता छ। यो ब्याट्री क्षमताका कारण प्रयोगकर्ताले विना कुनै अवरोध लामो समयसम्म फोन चलाउन सक्ने कम्पनीले बताएको छ। हामीले फोन एकपटक पूरा चार्ज गरेपछि १३० घण्टासम्म गीत सुन्न वा ४० घण्टासम्म फोन बोल्न वा २५ घण्टासम्म भिडिओ हेर्न सक्छौं।
साथै फोन अनलक गर्न यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ।
सामसङले चार वर्षको सुरक्षा अपडेट र २ जेनेरेसनको ओएस अपग्रेडको दिने भनेको छ। यसले अपडेटेट पर्फर्मेन्स र सुरक्षा वृद्धि गर्नेछ। त्यसैले यदि तपाईं ग्यालेक्सी एफ–२२ चलाउन खोज्न भएको छ भने टिकाउ हिसावले ढुक्क रहन सक्नुहुन्छ।
बजारमा यो फोन डेनिम ब्लु, डेनिम ब्ल्याक र डेनिक ह्वाइट रङमा उपलब्ध छ, अर्थात् निलो, कालो र सेतो।
स्मार्ट फोन किन्न चाहने विद्यार्थी, गेमर, फोटोग्राफीमा सौख भएका व्यक्तिका लागि ग्यालेक्सी एफ–२२ उपयुक्त फोन हुनसक्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १७, २०७८, १५:१५:००